Maalin: Janaayo 3, 2020
Gaadiid xushmad leh; Waxaan ku fulinaa gaadiidkeena, soo dejinta ama dhoofinta adeegyada gadiidka una imaanaa Jarmalka habka ugu aaminka ah ee saacada. Shaqaalaheena ku xeel dheer arimahan isla markaana leh tababarka loo baahan yahay [More ...]
Gaadiidka Dawlada Hoose ee Denizli wuxuu sii wadaa howlaheedii tababarka ee shaqaalaheeda loogu talagalay gaadiid tayo leh, aamin ah oo saaxiibtinimo leh. Dowlada Hoose ee Magaalada Denizli, aqoon-isweydaarsiga howlaha shaqada ah [More ...]
Gudoomiyaha Wershadaha Gawaarida (OSD) Gudoomiyaha Gudida Haydar Yenigün, ayaa dhamaaday dhamaadka sanadka oo si caam ah loogu yaqaan dhiirigelinta barnaamijka "Gawaarida Gawaarida Gawaarida". Barnaamijku wuu shaqeynayaa [More ...]
Agaasinka Guud ee Diiwaangelinta Dhulka iyo Cadastre ayaa shaaca ka qaaday in 657 shaqaale ah la shaqaaleysiin doono iyadoo la raacayo Sharciga Lambar 125 ee Shaqaalaha Rayidka ah ee laga shaqaaleysiin doono waaxyada adeegga gobollada. Murashaxiinta waxaa loo kala saari doonaa sida ku xusan dhibco KPSS (B) iyo sidoo kale [More ...]
Qoraalka dib-u-fiirinta ee ay diyaariyeen injineerada sareeya ee deegaanka E Report Report ee mashruuca Kanal Istanbul, oo abuuray dood dadweyne, wuxuu shaaca ka qaaday howlaha lagu fulin doono inta mashruucu socdo. Waxaa qoray injineerada deegaanka ee kanaalka Istanbul [More ...]
Markay taariikhdu ahayd 2 Janaayo 2020, TMMOB waxay u soo gudbisay diidmadeeda mashruuca Kanal Istanbul Mashruuca Gobollada iyo Qorsheynta Magaalooyinka in loo gudbiyo Agaasimaha Guud ee Qiimaynta Saamaynta Deegaanka, Oggolaanshaha iyo Kormeerka. [More ...]
Faruk Kir, Gudoomiyaha Sakarya Esraf Platform, ayaa sheegay inay rumeysan yihiin in Mashruuca Dawlada Hoose ee Mashruuca Nostalgic Tram uu siin doono guul magaalada. Isniintii, duqa magaalada Ekrem Yüce ayaa qabtay shir jaraa'id oo ku saabsan mashruuca taraamka. [More ...]
Abdullah Peker, Gudoomiyaha Midowga Gaadiidka iyo Shaqaalaha Tareenka, ayaa sheegay in midowga TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ iyo TÜVASAŞ ay yareeyeen oo xirmeen seddex hay'adood. Peker wuxuu yiri TÜDEMSAŞ waa qiimaha Sivas. [More ...]